शीर्ष नेताहरुको दसैं, कहाँ र कसरी मनाउँदै छन त ?
२७ असोज २०७८, बुधबार ५:४७
काठमाडौं । हिन्दुहरुको महान चाड दसैं यतिबेला धुमधामसँग मनाइँदै छ । राजधानी काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सर्वसाधारण आफ्नो गाँउ घर फर्किइसकेका छन ।
मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा ग्रहण गर्न नेतादेखि सर्वसाधारण आफ्नो घरमा जम्मा हुन्छन् । यो वर्ष राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले कहाँ र कसरी दसैं मनाउँदै छन ?
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यो वर्षको बडा दसैं काठमाडौंमा नै मनाउने छन ।
सरकार र कांग्रेस पार्टी सभापति दुवै नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रहेका उनले विजया दशमीका दिन परिवारमै टीकटालो गर्ने र यस पश्चात् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि नेताहरुसँग भेटघाट गरी दसैँ मनाउने कार्यतालिका रहेको प्रधानमन्त्री निजी निवासले जनाएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री ज्यू सरकारको गतिविधिमै व्यस्त हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा टीका थाप्न आउनुहुनेहरुलाई टीका लगाइदिने छन । यसबाहेक गृहजिल्ला डडेल्धुरा वा अन्त कतै जाने योजना छैन ।,’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि यो वर्षको दशैं काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित निजी निवासमा मनाउने छन ।
‘उनले परिवारलाई टीका लगाइदिनुहुनेछ भने, उनले सानीआमा शान्ता नेपाल र दाजु कृष्णकुमार नेपालको हातबाट टीका लगाउउने छन । परिवारहरुलाई टीका लगाउने यस्तै सामान्यरुपमा दशैं मनाउने छन,’ नेपालको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी सचिवालयका अनुसार यो वर्षको दशैं ललितपुरको खुमलटारमा नै पारिवारिक भेटघाटमा बिताउँदै छन ।
‘दशैंमा अरु के हुनु र रु टीका वा त्यस्तो तामझामभन्दा पनि सधैं झैं सामान्यरुपमा पारिवारिक सदस्यहरुको भेटघाट बढी महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । सबैजना सँगै बस्यो, खायो अनि छलफल गर्‍यो । दशैंमा पहिलेदेखि नै त्यस्तो विशेष गर्ने गर्दैनौं ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्षले दशैंको समयमा पार्टीकोे सामान्य भेटघाटसहित भक्तपुरस्थित बालकोटमा दैनिकी बिताइरहेका छन।
यो वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दशैं मनाउन नवमी अर्थात् असोज २८ गते गृहजिल्ला झापा जाँदै छन ।
‘उनी नवमीको दिन गृहजिल्ला जाँदै छन । तर, नाताले भाई पर्नेको यसै वर्ष देहावसान भएका कारण टीकाको कार्यक्रम भने छैन,’ निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका दशैं पनि बोहोराटारस्थित निजी निवासमा नै बित्ने भएको छ ।
‘दशैंको मेरो खासै केही छैन । मेरो पनि घरमा त्यस्तै (जुठो) परेको भएर यसवर्ष मेरो दशैं छैन ।
अब त्यस्तै हो, साथीहरुसँग भेट्छु, काँग्रेस महाधिवेशन चलिरहेको छ, यसरी नै बित्छ,’ पौडेल बताउँछन ।
सत्ता साझेदार दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर दशैंको लागि आफ्नो क्षेत्र महोत्तरी जाँदै छन ।
‘मेरो आफ्नो घर छैन । आफ्नो क्षेत्रमा जान्छु, साथीहरुले जहाँ–जहाँ घुमाउछन्, त्यही घुम्छु ।
मधेशमा घटस्थापनादेखि देवी र शक्ति पीठहरुमा जात्रा–पूजा शुरु भइसकेको छ । देवीको दर्शन गरेर दशैं मनाउछु ।’, ठाकुर बताउँछन ।
नेकपा एमालेमा राजीनामा बुझाएका नेता बामदेव गौतमले पनि यस वर्षको दशैं काठमाडौंमा नै बिताउँदै छन ।
नेता गौतमले दशैं अवधिमा देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आएको उतारचढाव र समग्र कम्युनिष्ट पार्टीबारे किताब लेखिरहनुभएको उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.डिला संग्रौला भने दशैं मनाउन सप्तमी अर्थात् असोज २६ गते विराटनगर गएकी छन ।
‘कोरोना महामारीका कारण पोहोर जिल्ला जान पाइएन । यसपटक विराटनगर जान्छु, त्यहाँ हाम्रो संग्रौला परिवारको सबैभन्दा जठो सदस्य मेरो ससुरा हुनुहुन्छ, उनको हातको टीका लगाउछु । परिवारमा आफन्तजनहरु आउनुहुन्छ, उहाँहरुलाई टीका लगाएर दशैं मनाउने योजना छ,’ संग्रौलाले भनिन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा भने दशैं मनाउनको लागि असोज २५ गते नै भारतको नयाँ दिल्ली गइसकेका छन ।
‘उनी प्रत्येक वर्ष नै दशैंका लागि दिल्ली जानेछन्, यो वर्ष पनि सोमबार बिहान ११ बजे दशैंका लागि दिल्ली गइसकेका छन,’ उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ । गोरखापत्र